Yunaayitid Isteetis keessaa uummanni miliyoona sadii ol vaayiresii koronaan qabamee kuma 137,00 ol kanneen ta’an ennaa du’anitti lakkoobsi namoota COVID-19n haaraa qabamanii ol ka’uu itti fufee jira.Weerara vaayiresii kanaa itisuuf uummati maaskii akka kaa’atu jajjabeessuun tattaaffii guutuu biyyaa ta’ee jira.
Kutaa wisconson Elkhart Lake keessatti Dorgommii konkolaataa daawwachuuf kanneen wal ga’aniif kumaan laka’aman erga weerarri vaayiresii koronaa dorgommii akkasii danqee qabee yeroo jalqabaaf walitti qabaman. Maaksii akka keyyatan itti himameera garuu dirqii hin turre.
Daawwattoonni kun dorgommichi Addunyaa irraa dorgommii beekamaa dha. Hundumtuu of eeggata. As dhufuu irratti yaaddoo hin qabu. Jedhan.
Itti aanaa ministrii eegumsa fayyaa Bretti Girooyir akka jedhanitti keessumaa naannolee COVID-19 itti hammaate keessatti maaskii kaayyachuun vaayiresiin kun daran akka hin facaane ittisa jechuun cimsanii yaadachiisaniiru.
Ala ennaa gad ba’an maaskii kaa’achuun dhugumatti barbaachisaa dha. Kun vaayiresiin namatti akka hin darbine faca’ina isaa akka gad buusu ni beekna. Kanaaf uummanni naannoo vaayiresiin kun hammaate keessa jiran dhibba irraa harki 90 maaskii kaa’achuu qaba. Yoo kan hin godhin vaayiresii kana to’achuu hin dandeenyu.
Prezidaant Tramp miseensota waraanaa fi hojjettoota eegumsa fayyaa hospitaalaa waraanaaWalter reed jedhamu kan Washington DC keessaa ennaa daawwatan torbanneen hedduuf didaa erga turanii booda yeroo jalqabaaf maaskii kaayyatan.
Prezidaantiin Polaand Marsaa Biraaf Injifatan